500 milyan oo shaqooyin loogu abuuro dadka dalka ku cusub - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Magdalena Andersson (S) wasiirka dhaqaalaha. sawir: Fredrik Sandberg/TT
La daabacay tisdag 20 juni 2017 kl 10.42
Xukuamadda ayaa hadda cadaadis saaraysa degmooyinka iyada oo miisaaniyadda dayrta looga qoondeeyey 500 milyan la geliyo wax loogu wacay adeegyada dheeraadka ah. Goolkana waa in sannadka dhamaadkii la abuuro 6 500 oo ah shaqooyin adeegyada dheeraadka ah.
– Waxa ay ku saabsan tahay in degmoyinka ay dad badan shaqooyin uga abuuraan adeega dheeraadka ah, waxa markas la siinayaa bonus ama gunno dheeraad ah degmooyinka sidaas sameeya. Ujeedadana waa in la shaqo geliyo dadka ka fog suuqa shaqada, gaar ahaan haweenka dalka ku cusub, ayey trir wasiirka dhaqaalaha dalka Magdalena Andersson.
Horey ayey xukumadda u shaacisay in dakhli shan bilyan gaaraya la gelinayo adeega bulshada oo qayb ka ah miisaaniyadda dayrta ee xumadda. Waxa horey loo sii ogaa in saddex bilyan oo ka mid ah la gelinayo adeega caafimaadka halka 1,5 bilyan la gelinayo iskuulka.
Haddana wasiiradda dhaqaalaha ayaa ka dhawaajisay in nus bilyanka soo haray la gelinayo waxa loogu wacay extratjänster oo lagu micneyn karo adeeg dheeraad ah, oo looga gol leeyahay in degmooyinka iyo maamuladda caafimaadka ee gobalada landsting ay shaqaaleeyaan dadka ka fog suuqa shaqada, sida dadka dalka ku cusub.
–Qof kasta oo laga shaqaaleeyo adeega dheeraadka ah degmada waxay ku helaysaa bonus ama gunno dheerad ah, kadib degmada ayaa go’aankeeda leh sida ay u isticmaalayaan lacagtan, waxa aanse rajeynayaa in ay shaqaale badan ka howl-geliyaan xaruumaha daryeelka carruurta, iskuulka iyo goobaha lagu daryeelo waayeelka, si ay carruurteena iyo waayeelkeena u helaan nolol maalmeed degan.
Xukumadda ayaa horey hade fuga dhigatay 20 000 oo ah shaqooyin adeega dheeraadka ah sannadka 2020 laakiin hadafkan ayaa waxaa ka horyimid caajis badan, sidas daraaded ayey xukumadda hadda dejisay hadaf qaybeed cusub, inta laga gaarayo dhamaadka sannadkan in la abuuro 6 500 oo shaqooyina aadeega dheeraadka ah.
– Halkan waxa aan qabaa in degmooyinka iyo maamulka caafimaadka ee gobolada ay sameyn karaan howl ka wanaagsan midda ay maanta sameynayaan, waayo waa arrin aysan dhaqaale uga baxaynin iyaga oo dhanka kale dadka fursad ah in ay lugta la galaan suuqa shaqa u abuuraya. Faa’idada kale waxay tahay in ay u sahlayso howlshooda shaqalaha rasmiga ah, tayaada na ay kor u qaadi karto dadka adeegsada, tusaale in qofka waayeelka ah in mar dheerad ah banaanka loo baxiyo ayey Magdalena Andersson wasiirka dhaqaalaha.